Quruxda Koongo: "Naagtu - waa adduunyo ka mid ah duufaanno aan la koobi karayn"; qaar badan oo ka mid ahi ma yaqaaniin sababta kakanaanta haweeneyda; kaliya waxay dhahaan (dumarku way dhib badan yihiin)
Sidee ayay Cadaanku u xakameeyeen sheeko hoosaadka Madow / Afrika? Waxay qof walba ku qanciyeen in, "runtu ay been tahay beentuna run tahay"; waxay isu muujiyeen inay yihiin kuwa haysta kali ahaanshaha runta, inay iyagu naftooda u haystaan, oo iyadu waa tan ka dhigaysa kuwa iyaga awood badan, “Waxay u shaqeysay sidii soo jiidasho, dabcan. "
Maalinta kaneecadu ku degto, xiniinyahaaga, waa maalinta aad ogaato inay jiraan siyaabo lagu xaliyo dhibaatooyinka aan rabshad lahayn.
Maxaa Afrika loogu yaqaan Afrika? Ereyga Afrika muddo dheer ayaa loogu magacdaray qaybta woqooyi ee qaaradda Afrika: "Saxaraha Afrika ka hooseeya waxaa loo yaqaanay Itoobiya", oo ah eray asalkiisu aad u xiiso badan yahay erayga Griigga ah ee Aithiops oo si toos ah u tilmaamaya waddanka ay dadku wajigooda ka gubteen Cadceed
Maalmihii hore ee wanaagsanaa ee "Térébinthes de la caddaaladda"; Thanks to "Téréyaya Compilations", waxaan mudnaan gaar ah u leenahay dib u soo celinta maalmahaa qurxanaa ee quruxda badnaa markii muusikada Afrika ay si dhab ah uga soo muuqatay calankeeda istic (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: Sebtember 26, 2020 00: 40 No Comments
Badanaa tixraaci maayo dadka u dhashay Oceania ama qayb hoosaad Hindida, oo maqaarkiisu inta badan ka mugdi badan yahay kuwa Afrikaanka qaarkood iyo xoogaa afro ah. Sababta waa fududahay: dadka reer Yurub, "madow" waa Afrikaan, taas macnaheedu waa addoon (Addoonka mustaqbalka, farac ka mid ah addoonka, addoonka iman kara: wax kastoo.) Fikradda nin madow - taasoo aasaaska u ah cunsuriyadda ayaa aasaasiyan ku xiran addoonsiga.
Xaqiiqda ah in dad badan oo Afrikaan ah iyo Afro-farac ah, jahli dartiis, in ka badan laba qarni ka dib markii la tirtiray addoonsiga, wali waxay isu tilmaamayaan "madow", sidaas awgeedna waxay isku darayaan fikradaha ay abuureen slawaagii reer Yurub ee qarnigii 15aad. qarnigii, sida muuqata waa heerka ugu sarreeya ee ka fogaanshaha maskaxda iyo addoonsiga. Waxaan ka garan karnaa tan qiimaha siyaasadeed ee fikradda diidmada, oo ay wataan indheer-garad ay ka mid yihiin cunsuriyad iyo gumeystihii Faransiiska. (bidix-midig oo laysku daray) ayaa kor u qaadaysay tan iyo 30-yadii, iyadoo saamaynaysa dhaleeceynta iyaga. Waxaan sidoo kale soo gabagabeyn doonnaa wargeysyada Faransiiska ee faa'iidada u leh "madow" (madow) laakiin waligeed kama dhicin "Yuhuudi" (Yuhuudi). Sidaas Le Monde ama Xoreynta.
Ma jiraan “madow” maxaa yeelay qofna kuma tilmaami karo qof bani’aadam ah midabkiisa isagoo aan cunsuriyad ahayn. Kafiican inaad kahadasho afrikaanka madow (Africans) iyo faracii Afrikaanka!
Oct22 07: 17
Si xun u isticmaalida baraha bulshada, lamaane ayaa dharbaaxay gabadhooda "Sida markii waxbarashadu wali waxbarashada ahayd, markay waalidku si sax ah u buuxiyeen kaalintii aabenimo, aabe iyo hooyo ayaa garaacay gabadhooda ku xadgudubka isticmaalka shabakadaha bulshada ”… (VIDEO)
Markii mas'uuliyiinta Congo ay u oggolaadaan safiirada loo aqoonsan yahay Kinshasa inay sankooda ku dhajiyaan wax walba oo ka jira DRC: Walaalaha Qaaliga ah ee Afrika iyo gaar ahaan idinka oo ka socda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo (DRC), KongoLisolo waa mid siyaasadaysan oo aan la jaanqaadi karin, laakiin waxaan isweydiineynaa "Maxay safiirada, fadhigoodu yahay Kinshasa, ka qabtaan DRC, safiirrada Koongo ma ka qaban karaan waddamada laga aqoonsan yahay?" "
Oktoobar 21, 2020 15: 46
Muxuu ahaa (waxa loogu yeero) allabarigii Masiixa? “Ciise Masiix waa kan noqday noqoshada iyo soo noqoshada iyo soo noqoshada; wuxuu u yimid inuu raadsado oo badbaadiyo (sida la filayo) wixii lumay; wuxuu u maleynayay inuu u yimid inuu ka qaado dunuubta adduunka ”; sida ku qoran waxa isaga laga qoray: aynu qirno
Oktoobar 19, 2020 12: 12
Ilaaha Xasuuqa Masiixiyiinta: Ilaaha Masiixiyiinta wuxuu galay dambiyo badan oo xasuuq; adoo tixraacaya baybalka, (erayga Ilaah), ee loogu talagalay Masiixiyiinta, waxaa la caddeeyay iyadoo aan cillad lahayn in Ilaahood yahay ka-soo-horjeed xasuuq, iyo in mar kale ay garaaci karto xitaa, sida ku xusan Qorniinka Quduuska ah, bible
Oktoobar 19, 2020 09: 09